विदेशबाट रित्तो हात स्वदेशमा फलिफाप - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ०६, २०७६ समय: १६:२७:५९
प्यूठान / करीब ६ वर्ष मलेशिया र दुबईमा परिश्रम गरी फर्केका ऐरावती गाउँपालिका–४ धुवाङका डुकबहादुर पुन स्वदेश फर्केर बाख्रापालन तथा तरकारीखेतीमा लागेका छन् । जीवनको ऊर्जाशील समयमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर स्वदेश फर्केका उनी अहिले आफ्नै गाउँमा रमाएका छन् । धेरै कमाउने आशाले ६ वर्षसम्म विदेश बसे पनि सोचेजस्तो कमाइ नभएपछि स्वदेश फर्किएको उनी सुनाउँछन् । ‘दैनिक १७–१८ घण्टा काम गर्दा पनि १ वर्षसम्म गएको ऋण तिर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘विदेशबाट रित्तो हात स्वदेश फर्कें ।’
स्वदेश फर्किएर उनले आफ्नै गाउँमा तरकारीखेती तथा व्यावसायिक बाख्रापालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् । शुरूमा ५ रोपनी जग्गामा तरकारीखेती गरेका उनले पछि बाख्रापालन समेत गरेका छन् ।
पुनले २०६९ सालदेखि व्यावसायिक रूपमा प्रांगारिक तरकारीखेती गर्दै आएका हुन् । उनको कृषिफार्ममा गोलभेँडा, करेला, भन्टा, बोडी, सिमी, अकबरे खुसार्नी, बन्दागोभीलगायत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती हुने गरेको छ । यस्तै २०७३ सालदेखि बाख्रापालन फार्म दर्ता गरी उनले स्थानीय खरी जातका बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । उनको फार्ममा अहिले २८ माऊसहित ४३ ओटा बाख्रा छन् । तरकारी खेती र बाख्रापालनबाट वार्षिक रू. २ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । यही वैशाखदेखि साउनसम्म मात्र रू. ८० हजारबराबरको खसीबोका विक्री गरेको उनले बताए । ‘स्वदेशमा गरेको मेहनतको मीठो फल अहिले पाउँदै छु,’ उनले भने, ‘आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने हो विदेशको भन्दा बढी पैसा कमाउन सकिँदो रहेछ ।’
उत्पादित तरकारी स्थानीय बजारमै खपत हुने गरेको पुनले बताए । यस्तै खसीबोका खरीद गर्न घरमै ग्राहक आउने गरेको उनले सुनाए । ‘बजारको समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर फार्मसम्म आउने सडक स्तरीय नहुँदा ग्राहकलाई असहज भएको छ ।’ यातायातको राम्रो व्यवस्था भएमा तरकारीखेती विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । गाउँका युवालाई रोजगारीका लागि विदेशमा जानुभन्दा गाउँमै बसेर कुनै न कुनै व्यवसाय गर्न उनी सुझाउँछन् ।